घरभित्रै बसे पनि सुख नपाउने – eSidhakura
मुख्य पृष्ठमुख्य समाचारघरभित्रै बसे पनि सुख नपाउने
घरभित्रै बसे पनि सुख नपाउने
काठमाडौँ । नेपालमा देखिएको प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा ग’म्भीर असर गर्ने खतरा देखिएको छ । सुक्खा मौसममा मौसमी हावाले ल्याउने प्रदूषणसँगै देशभित्र प्रकोपझैँ फैलिएको डढेलोपछिको प्रदूषणले जघन्य असर पु¥याउने प्रस्ट छ ।
मङ्गलबार साँझ झ्यालबाट बाहिर नाक निकाल्न नहुने कडा वायु प्रदूषण काठमाडौँलगायतका विभिन्न सहरमा बढेको थियो । यस समयमा काठमाडौँ उपत्यकाको भक्तपुर र भैँसेपाटीमा वायु प्रदूषण उच्च भयो ।भक्तपुरमा वायु प्रदूषणको स्तर सबैभन्दा बढी ४८० सूचकाङ्क पुगेको थियो ।
धनगढीमा ४७७ र भैँसेपाटीमा सूचकाङ्क ३३३ पुगेको वातावरण विभागको वायु गुणस्तर अवलोकन प्रणालीले जनाएको छ । बुधबार बिहानदेखि मध्यान्हसम्म वातावरण थोरै उज्यालियो । अपरान्हपछि उस्तै गाढा बन्न पुग्यो । यस्तै अवस्था कायम रहे मानिस घरभित्रै बसे पनि सुख पाउनेछैनन् ।
भित्रै बस्दा पनि आँखा पो’ल्ने, घाँटी खि’¥याउने जस्ता स’मस्यासँगै बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा स’मस्या पर्न थालेको काठमाडौँवासी बताउँछन् ।सिमरा, भरतपुर पोखरालगायतका स्थानमा वायु प्रदूषण उच्च बन्दै गएको छ । वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीले हरेक दिन दिउँसो केही कम प्रदूषण देखिए पनि आगामी दिनमा प्रदूषण थप बढ्ने बताए ।
उनका अनुसार यसै विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा थप छलफल भएको छ । सोमबार एकै दिन देशका आठ सय स्थानमा ड’ढेलो लागेको थियो । आइतबार ७२८ स्थानमा डढेलो लागेको थियो । मङ्गलबार अपराह्न केही घटेको ड’ढेलो बुधबार बिहान फेरि बढेको छ । याे खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
जहाँ विवाद त्यहाँ इश्वर पोखरेल
क्याप्टेन बिजय लामा द भ्वाइस अफ नेपालको ब्लाइंडअडिसनमा, को-को घुमे ? (भिडियो)
इतिहास रचिन् गाेर्खाली चेलीले !
नेपाली भादगाउँले टोपीमा जेकी श्राफ !
पूर्वराजालाई भि’त्र्याउन ठूलो तयारी
रामेछापमा मोटरसाइकलमा लिफ्ट मागेर पाकेटमार गर्ने युवती प’क्राउ
४ कर्मचारी गु’माएको गुल्मी प्रशासन शो’कमा, सबै सेवा ठप्प